BARADHADA "IVAN DA MARYA": SHARAXAADDA KALA DUWAN, ASTAAMAHA IYO SAWIRRADA - BEER CAGAARAN
Baradho cajiib ah "Ivan da Marya": sharaxaadda kala duwan, sifooyinka, sawirada
Way adag tahay in la qiyaaso miiskeena aan baradho lahayn. Dhammaan noocyada, waa wax fiican - la shiilay, la shiilay, baradho la shiiday, baradhada french, barandhada la kariyey, iyo dhammaan suxuunta lama tirin karo.
Baradhadu waxay ka muuqatay Ruushka qarnigii 17aad, Peter 1 laga keenay Holland, laakiin waxay dadka reer Ruushku aqbalaan dhaqanka cusub iyo xitaa loo yaqaan "Devil's Apple", oo kaliya qarnigii 19aad waxay barafku noqdeen mid ka mid ah cuntooyinka nacasta ah, rootiga labaad.
Fure u ah goosashada baradhada sare waa noocyo kala duwan. Hawsha ugu weyn ee ninkii beerta ka shaqaynayay iyo gardarradu maaha in uu qalad sameeyo doorashada noocyo kala duwan, iyo da ', cadeeyay, iyo alaab cusub, si loo doorto mid ka mid ah shuruudaha buuxa ee shuruudaha, cimilada iyo culeyska labadaba.
Baradhada "Ivan da Marya": sharaxaadda noocyada kala duwan
Magaca dugsiga Ivan da Marya
Sifooyinka guud goor dambe oo hiwaayadeed kala duwan oo aan caadi ahayn oo la xasuusto
Wakhtiga uurka 120-150 maalmood
Mawduucyada Starching 8-14%
Tirada digriiga duurka 12-25
Yield 200-320 c / ha
Tayada macaamilka dhadhanka caadiga ah, ku haboon suxuun kasta
Midabka maqaarka caddaan iyo casaan
Midab daruuf caddaan
Gobollada la doorbido ciid iyo jawi kasta
Cadaadiska cudurada u nugulaanta qolofka, si dhexdhexaad ah u adkaysata caleenta goor dambe iyo caleemaha curdunka iyo kansarka baradhada
Noocyada sii kordhaya Abaarta waxay u baahan tahay waraabinta, maaddada abuurku waxay ku xiran tahay xumaanshaha
Asalka laga soo raray Ruushka by jinsiyadaha qaranka
Dalka Ruushka, Ivana da Maria waa muddo dheer. Tani waa baraf baraf ah oo soo daahay, waxay qaadataa 115-120 maalmood laga bilaabo biqilka si ay u buuxsamaan, laakiin geedi socodka cagaarka way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran tahay cayayaanka cimilada. Ivana da Marju waxaa loo dhiibay Holland, ilmeheeduna wuxuu ahaa nooca Picasso. Sanadkii 1995, noocyada kala duwan ayaa lagu soo galay liiska Diiwaangelinta Gobolka waxaana loo ogolaaday inay koraan dalka Ruushka.
The baadiyaha of noocyada this waa toosan oo dheer, oo leh tiro badan oo caleemo waaweyn, caleemaha si toos ah u leexiyaan karaa dhulka. Blooms profets, ubax waa caddaan iyo wax yar oo qasan, laakiin duufaanku wuxuu ku dhowaadaa ma sameysmaan, ubaxu si dhakhso ah u dhaco.
Dalagyada rootida ee qaabka saxda ah ee wareegsan, dildilaac jilicsan, lafo iyo impregnations on - indhaha, indho yar yar. Jidhka ayaa la gooyaa midab cream leh. Celceliska miisaanka ee tuber waa 100-120 garaam, waxay gaari kartaa 180 garaam, waxaa jira ku dhowaad no digriiga yaryar. Waxyaalaha dherjansiga ayaa sarreeya - laga bilaabo 8 ilaa 14 boqolkiiba. Kala duwan tani waxay ku badan tahay fitamiin C, gaar ahaan xilliga beergooyska.
Isbarbardhig dabeecaddaas baradho, sida maaddada dareeraha ee ku jirta waxaa la barbardhigi karaa iyadoo la isticmaalayo jadwalka hoose:
Lakabyada laadadka 11-16%
Zhukovsky hore 10-12%
Alladin ilaa 21%
Beerta Bryansk 16-18%
Akhri sidoo kale dadka kale - daawooyinka iyo ma aha oo keliya maadooyinka baradho.
Waa maxay khatarta ah ee solanine, faa'iidooyinka iyo waxyeelada caafimaadka ee baradhada ceeriin, casiir iyo sprouts, taas oo faa'iido u leh baradhada macaan.
Caawin! Baradhadu waxay hodan ku yihiin cusbooyinka potassium, kuwaas oo awood u leh inay ka saarto jeexjeexyada jidhka ka yimaada waxayna xakameynayaan geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka.
Hoos waxaa ku qoran sawirka waxaad ka arki kartaa baradhada "Ivan da Marya":
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu baraarujiyo baradhada. On our site waxaad ka heli doontaa articles badan oo xiiso leh mawduucan.
Akhri dhammaan wixii ku saabsan tiknoolajiyada Hollandka, beerista noocyo hore, ganacsiga baradhada, waddamada ay khudraddan caan ku tahay. Iyo, sidoo kale, hababka kale ee goosashada - hoos caws, bacaha, foosto, sanduuqyada, laga bilaabo abuurka.
Ivana da Maryu waxaa lagu kori karaa meel kasta oo cimilada ah. Kala duwanaanshuhu wuxuu noqday mid aad u jecel beeraleyda sababtoo ah iyada oo aan la qabin iyo adkaysiga abaarta, waxay u dulqaadanaysaa heerkulka sare ee ciidda iyo hawada, uma baahna farsamooyinka beeraha gaarka ah. Geedka waa in la bilaabo bilowga, la siiyo cimilada deegaanka, laakiin ugu muhiimsan - inta lagu jiro ubaxyada caleemaha on bjørk.
Kala duwanaanta noocaan ah waxay jecel yihiin carrada cagaarka ah, waxoogaa acidified.. Baradhadu waxay si aan fiicnayn u koraan carrada aadka u culus ee loo yaqaan 'scab'. Ivan da Marya waa noocyo aad u sarreeya, oo leh hal baadiyaha waxaad ka qaadan kartaa 15-20 digriiga. Wax-soosaarka digriiga badeecadda ayaa sidoo kale aad u sarreeya, gaaraya 94 boqolkiiba. Baradhadu si fiican ayaa loo kaydiyaa, haynta tayada - 90 boqolkiiba, taas oo ah, ka dib jiilaalka, baradho ayaa lumisa 10 boqolkiiba oo keliya dalagga.
Jadwalka hoose wuxuu muujinayaa tayada haynta noocyo kale oo baradho ah:
Magaca dugsiga Xoqinimo
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan kaydinta baradhada: wakhtiga, heerkulka, meelaha iyo dhibaatooyinka. Iyo sidoo kale sida loo xafidayo xididada jiilaalka, dukaanka khudradda, maqaasiinka ama qolalka, iyo sidoo kale balakoonka, sawir qaadaha, qaboojiyaha iyo diirran.
Kala duwan ayaa u adkaysata cudurrada baradho badan:
in uu ku dhaco fayraska curlka;
ee fayruusyada A iyo Yn.
Khasaarada ugu weyn ee kala duwan ee noocaani waa guuldarro weyn oo ah qolof baradho. Iyada oo cudurka kufsiga on digriiga dillaacsan, koritaanka, boogaha muuqan, dhadhan xumayn, contentkuliga ee baradho hoos u dhaco. Baradho xanuun aan loo isticmaali karin beeritaanka. Intaa waxaa dheer, Ivan da Marya ayaa laga yaabaa in ay yaraatoSidaa darteed waxaa muhiim ah in la baddalo alaabta wax beerto wakhtigeeda. Si aad u hesho dhalid sare, kaliya digriiga caafimaad qaba, kuwa aan daweynta lahayn waa in loo doortaa beeritaanka.
Si loo ilaaliyo baradhada cudurka kabuubka, Ha isla markiiba ha siinin lime ama digada cawska ah ee ciidda ka hor inta aan la beeri.
Liming ee ciidda yaraynaysaa aysidhka, iyo sida kor ku xusan, baradhada Ivan-da-Marya jecel yahay carrada acidified.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan cudurrada barafka sida caadiga ah sida Alternaria, Fusarium, Verticillis, Xummad Xummad.
Ka hor inta beerto digriiga leh sprouts, waa in la daaweeyo iyaga daroogada "Agat -25-K", tani waxay kordhisaa dhalidda iyo horumarinta iska caabinta cudurada kala duwan.
Dhammaan beerta, bannaanka u yaqaan weerarka barafka sida, sida baradho-baradho Colorado! In sirqoollada yar ee guriga ee baradho duqsiyo Colorado iyo dirxiga waxaa sida caadiga ah la goostay by gacanta oo waa in la gubay. Si loola dagaallamo cayayaankan iyadoo la adeegsanayo hababka dadweynaha iyo sunta cayayaanka. Waxaa jira noocyo badan oo kiimikooyin ah oo macnaheedu yahay in lagu buufiyo baradho, oo ay ku jiraan Inta badan Vir, Bowerin, Mospilan, Aktara, Bankol, Bitoxibacillin, Regent, Corado, Prestige.
Qiyaas digniin ah ayaa lagu beeray sariiraha barafka ee dhirta oo leh cabsi, ur xooggan, sida toon, marigold, calendula. Ka mid ah daawooyinka dad - rusheeyo infusions of toon, daboolka yaanyo, isku dar ah oo ah Gooryaanka iyo ash.
Waxaad arki kartaa habka loola dagaallami karo duqsiyada Colorado ee aan lahayn kiimikada fiidiyowga:
Daryeelidda baradho horay loo beeray waxay ka kooban tahay loosening, burburinta ciidda, duurka hills, mulching, waraabinta iyo bacarimiso. Si kor loogu qaado kobcinta iyo ilaalinta baradho laga bilaabo xilliga gaduudan, duurka waxay u baahan yihiin in lagu buufiyo Epin-Extra. Inkastoo xaqiiqda ah kala duwanaanshahan waa abaar u adkaystaHaddii ay suurtagal tahay, isticmaal waraabin waraabin ama nidaam waraabin ah dhammaan marxaladaha horumarinta baradho.
Akhri waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan boggeena ku saabsan haddii hilling uu muhiim u yahay bataatiyada, sida loo sameeyo, sida loo sameeyo si sax ah gacanta ama socodka iyo haddii ay suurtogal tahay in ay koraan dalag fiican oo aan la jarjarin iyo hilling. Iyo sidoo kale, waxa la quudiyo baradho, goorta iyo sida loo dalbado Bacriminta, sida loo sameeyo si haboon marka laga beerto, kaas oo ka mid ah dharka ugu fiican iyo waxa xoogga Bacriminta macdanta.
Waxaan rajeyneynaa in Ivan da Maria uusan u oggolaan doonin inuu bannaanka u yahay, bannaanka, iyo dhammaan talooyinkayaga ayaa kaa caawin doona koritaanka dhalidda sare.
Waxaan sidoo kale bixinaynaa si aad u barato noocyo kale oo baradho ah oo leh shuruudo kala duwan:
Xilliga dhexe Gaar ahaan hore Xilliga bartamaha
Vektor Gingerbread Man Weyn
Crane Santa Furan
Rogneda Ivan da Shura Rabo
Aurora Muuqaalka Tafsiir Skarb Innovator Alvar Magician Krone Baaskiil